तपाइँको क्रल बजेट बुझ्दै - Semalt विशेषज्ञ विचार
एसईओ जीवनको ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जुन सधैं सिक्नको लागि केहि नयाँ हुन्छ। हाम्रो आगंतुकहरु को लागी जो हाम्रो साइट अनुसरण गर्दै छन्, हामी निश्चय छौं कि तपाईले लेखहरु भेट्टाउनु भएको छ कि एसईओ को पहलुहरु को बारे मा कुरा गर्नुभयो जुन तपाईलाई थाहा छैन अवस्थित छ। यसले देखाउँछ कि एसईएम ब्रह्माण्डमा के भइरहेको छ त्यसमा मात्र Semalt अपडेट गरिएको छैन तर त्यहाँ Semalt वेबसाइटमा तपाईले पढ्न सक्ने केहि नयाँ कुरा पनि हुन्छ।
तपाइँको एसईओ कसरी सुधार गर्ने भनेर थाहा पाउँदा तपाइँको क्रल बजेट चर्चा गरिएको पहिलो चीज होइन। यद्यपि यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन ठूलो महत्त्वको हुन्छ। तपाईलाई थाहा छैन क्रल बजेट के हो र तपाईले सोध्दै हुनुहुन्छ, "के यसको मतलब मैले अझ धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्छ?" ठीक छ, हामी तपाईंलाई जवाफ दिन मद्दत गर्दछौं पहिले एउटा क्रल बजेटबाट हामी के भन्न खोज्छौं।
क्रल बजेट के हो?
क्रल बजेट एक शब्द हो जुन एसईओ उद्योग द्वारा आविष्कार गरिएको थियो। यसले पृष्ठको संख्या निर्णय गर्ने क्रममा र खोज इञ्जिनहरूले प्रयोग गर्ने सम्बन्धित अवधारणा र प्रणालीहरूको स indicates्केत गर्दछ जुन कुन पृष्ठहरू तपाईंको वेबसाइटमा क्रल हुनेछ। तपाईं यसमा ध्यान खोजी ईन्जिनहरूले वेबसाइटहरूलाई दिने रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यदि तपाईंले सोच्नुभयो कि तपाईं नै एक जसले तपाईंको क्रल बजेट निर्धारण गर्नुहुन्छ, तपाईं गलत हुनुहुन्थ्यो। वास्तविकतामा, खोज इञ्जिनहरूले एक वेबसाइटमा क्रल बजेट तोक्दछन्, तर जब तपाईं यो लेखको साथ हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटलाई फाइदाको लागि कसरी स्केलहरू टिप गर्ने भनेर सोच्नुहुनेछ।
क्रल बजेट अप्टिमाइजेसन चरणहरूको एक श्रृंखला हो जुन तपाईं दर वा फ्रिक्वेन्सी सुधार्ने मनसायले लिन सक्नुहुनेछ जुन सर्च इन्जिन बट्सले तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा भ्रमण गर्‍यो। अधिक पटक तपाईंले यी बढावाहरू भेट्न पाउनुहुनेछ, पृष्ठहरू अपडेट भएको छिटो यो सूचकांकमा जान्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं छोटो अवधिमा वेब अप्टिमाइजेसनको अधिक फाइदाहरूको आनन्द लिन थाल्नुहुन्छ। अब जब तपाई यसलाई यस तरीकाले देख्नुहुन्छ, तपाईले बुझ्न थाल्नु भयो कि किन तपाईको क्रल बजेट यति महत्वपूर्ण छ, किन?
खोजी ईन्जिनहरूले किन वेबसाइटहरूमा क्रल बजेट तोक्छन्?
खोज ईन्जिनसँग असीमित संसाधनहरू छैनन्, र जब खोजी खोजी इनपुट हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो सीमित संसाधनहरू धेरै अरब वेबसाइटहरूमा फैलाउनु पर्छ। विश्वसनीय रहनको लागि, खोज इञ्जिनहरू उनीहरूको क्रलिling्ग प्रयासहरूलाई प्राथमिकता दिन बाध्य छन्। प्रत्येक वेबसाइटमा क्रलिंग बजेट तोक्दै, उनीहरूले छोटो समयमा अधिकतम उपयोगी खोजी परिणामहरू प्रदान गर्न मद्दतको लागि प्राथमिकताहरूको पैमाने सिर्जना गर्न सक्दछन्।
क्रल बजेट किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
शीर्ष एसईओ कारकहरूको सूचीमा यसलाई ध्यान नदिने कुरा बनाउने कुनै चीजको लागि, तपाईं यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी किन यसको बारेमा छलफल गर्न पनि दिक्क मान्दछौं। ठिक छ, तपाईंको वेब क्रल बजेट महत्वपूर्ण छ किनकि यसको बिना गुगलले तपाईंको वेबसाइट वा तपाईंको वेबपृष्ठलाई अनुक्रमणिका गर्दैन; यो कहिले पनि श्रेणी छैन।
यही स्थानमा क्रल बजेट खिलिन थाल्छ। यदि तपाईंको वेबसाइटमा पृष्ठहरूको संख्या तपाईंको साइटको क्रल बजेट भन्दा बढी छ भने, तपाईंसँग पृष्ठहरू छन् जुन अनुक्रमणिका हुनेछैन। जे होस् धेरै वेबसाइटहरूले क्रल बजेटको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन, त्यहाँ के त्यहाँ केही केसहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो क्रल बजेटमा ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ।
जब तपाईं ठूलो साइट चलाउनुहुन्छ: यदि तपाईंसँग १०,००० पृष्ठहरू (मानक ई-वाणिज्य वेबसाइट) को साथ वेबसाइट छ भने, गुगललाई ती सबै पृष्ठहरू फेला पार्न गाह्रो लाग्न सक्छ।
यदि तपाईंले भर्खर भर्खर केही नयाँ पृष्ठहरू थप्नुभयो भने: यदि तपाईंले हालसालै तपाईंको साइटमा नयाँ सेक्सन थप्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो क्रल बजेटलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ कि ती सबै द्रुत रूपमा अनुक्रमित हुन्छन् कि भनेर।
धेरै धेरै रिडिरेक्टहरू: जब तपाईंसँग धेरै वेबसाइटहरूमा रिडिरेक्ट र रिडाइरेक्ट चेनहरू छन्, यसले तपाईंको क्रल बजेट खान्छ।
मानिसहरू किन उनीहरूको क्रल बजेटलाई वेवास्ता गर्छन्?
यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, तपाईंले Google द्वारा यो आधिकारिक ब्लग पोष्ट हेर्न आवश्यक छ। गुगलले स्पष्ट रूपमा वर्णन गरेझैं, आफैंमा क्रल हुने क्रमको कारक होइन। यो एक्लैले जान्नको लागि केहि एसईओ पेशेवरहरुलाई उनीहरूको क्रलिंग बजेट सुधार गर्न को लागी रोक्न पर्याप्त छ। धेरै एसईओ पेशेवरहरु "एक रैंकिंग कारक छैन" "यो मेरो व्यापार को कुनै पनि छैन" अनुवाद। मा Semalt, हामी त्यस्तो तरिकामा सोच्दैनौं। एसईओ र वेब प्रबन्धन उद्योगमा हाम्रो वर्षहरूमा, हामीले सिकेका छौं कि एसईओ केवल ठूला परिवर्तनहरू गर्ने मात्र होइन सानो, वृद्धिशील परिवर्तनहरू गर्ने र दर्जनौं मेट्रिक्सको हेरचाहको बारेमा हो। हामी पनि ध्यान दिन्छौं कि ती साना चीजहरू तपाईंको वेबसाईटलाई क्रमबद्ध गर्ने उत्तम मौका दिन अनुकूलित छन्।
साथै, गुगलका जोन मुलरले भने कि क्रोल बजेट आफैंले क्रलिling्ग कारक होइन, रूपान्तरण र वेबसाइटको समग्र स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। त्यो भनिएपछि, हामी विश्वास गर्छौं कि यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी तपाईंको वेबसाईटमा केहि पनि सक्रिय रूपमा तपाईंको क्रल बजेटमा चोट पुर्‍याउँदैनौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछौं।
तपाइँको क्रल बजेट कसरी अनुकूलन गर्ने
Robots.txt मा तपाईंको महत्त्वपूर्ण पृष्ठहरूको क्रलिंगलाई अनुमति दिनुहोस्
तपाईको क्रल बजेटलाई अनुकूलन गर्न यो प्राकृतिक पहिलो र महत्त्वपूर्ण चरण हो। यो पनि एक दिमाग नभएको छ किनकि तपाईं आफ्नो रोबोट.टी.टी.एक्सटी प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ हातले वा वेब अडिटर उपकरण प्रयोग गरेर। जहाँसम्म, सम्भव भएसम्म हामी तपाईंलाई उपकरणको लागि जान सल्लाह दिन्छौं। यस उदाहरणमा, उपकरणको प्रयोग मात्र अधिक सुविधाजनक र प्रभावकारी छ।
तपाइँ केवल आफ्नो रोबोट.टी.टी.टी. लाई आफ्नो मनपर्ने उपकरणमा थप्न सक्नुहुन्छ, र यसले तपाइँलाई तपाइँको डोमेनमा केहि पृष्ठको क्रलिling्ग सेकेन्डमा अनुमति वा ब्लक गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं त्यसपछि सम्पादित कागजात अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो सबै हुन्छ। तपाईं यो हातले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर अनुभवबाट, विशेष गरी जब ठूलो वेबसाइटसँग डिलि when गर्दा उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ।
तपाईंको रिडाइरेक्ट चेनहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस्
हामी यसलाई विचार गर्न चाहन्छौं साधारण अर्थमा जब तपाइँको वेबसाइटको स्वास्थ्यसँग काम गर्ने। आदर्श रूपमा तपाई आफ्नो डोमेनमा एकल रिडाइरेक्ट चेन राख्नबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ, तर वास्तवमै ठूला वेबसाइटहरूका लागि, 1०१ र 2०२ रिडाइरेक्टहरू केहि हुन् जुन तपाईं भेट्न तयार हुनुपर्दछ। तिनीहरूको आफ्नैमा, यो कुनै समस्या छैन, तर जब तपाईं यी सँगै जंजीरको गुच्छा बनाउन थाल्नुहुन्छ, तपाईंको क्रलिंग सीमामा प्रहार हुनेछ। यो यति नराम्रो हुन सक्छ कि एक बिन्दुमा, खोज इञ्जिन क्रोलरहरू केवल पृष्ठमा पुग्न बिना क्रलिंग रोक्न सक्छन् जुन तपाईंलाई अनुक्रमणिका आवश्यक छ। नडराउनुहोस् यदि तपाईं एक वा दुई पुनर्निर्देशन देख्नुहुन्छ; संभावना छ कि तिनीहरूले क्षति छैन। जे होस्, यो त्यस्तो चीज हो जुन सबैले खोज्नु पर्छ।
HTML प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ
केवल केही चयन ईन्जिनहरू जाभास्क्रिप्ट, फ्ल्यास, र XML वेबसाइटहरू क्रलिlingमा राम्रो छन्, र केही चयनहरू द्वारा, हामी गुगललाई संकेत गर्दैछौं। गुगल बाहेक, अन्य खोज ईन्जिनहरूले यति विकसित वा उन्नत भएका छैनन् कि ती वेबसाइटहरू क्रल गर्न सक्छन् जुन HTMLमा छैनन्। त्यस कारणले गर्दा, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाइँ HTML मा टाँसिनुहोस्। यस तरिकाले, तपाईंको क्यान्टले तपाईंको क्रलिंगको संभावनालाई चोट पुर्‍याउँछ।
HTTP त्रुटिहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
HTTP त्रुटिहरूले तपाइँको क्रल बजेटको एक ठूलो भाग खान्छन्। 1०१ र 10१० पृष्ठहरूले तपाईको प्रयोगकर्ता अनुभवलाई नोक्सान गर्दैनन्, तर ती तपाईंको क्रल बजेटमा पनि खान्छन्। यसैले यो सबै महत्वपूर्ण4xxx र 5xx स्थिति कोडहरू ठीक गर्न महत्वपूर्ण छ। अन्तमा, यो एक win-win अवस्था हुन्छ। यो त्रुटि ठीक गर्दा, तपाईं वेब उपकरण को उपयोग यो बुद्धिमानी हुन्छ। SE रैंकिंग र स्क्रिमि F फ्रुrog जस्ता उपकरणहरू उत्कृष्ट उपकरणहरू हुन् जुन हामी पेशेवरहरूले तपाईंको वेबसाइटको अडिट गर्न र त्यस्ता त्रुटिहरू ठीक गर्न प्रयोग गर्दछौं।
तपाईंको URL प्यारामिटरहरूको ख्याल राख्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइट डिजाईन गर्दा, यो याद राख्नुहोस् कि वेब क्रोलरहरूले अलग यूआरएलहरू अलग पृष्ठहरूको रूपमा गणना गर्दछ, र यसैले, तपाइँ एक अमूल्य क्रल बजेट बर्बाद गर्नुहुन्छ। तपाईलाई यो हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईंको ईन्जिन प्यारामिटरहरूको बारेमा तपाईंको खोजी ईन्जिन (गुगल) लाई बताएर। यो गरेर, तपाईं तपाईंको क्रल बजेट बचत गर्नुहोस् र नक्कल सामग्रीको बारेमा चिन्ताहरू उठाउनबाट बच्नुहोस्।
तपाईंको साइटम्याप अपडेट गर्नुहोस्
तपाईको XML साइटम्यापको ख्याल राख्नु अर्को जित्ने अवस्था हो। यसले खोजी ईन्जिन बट्सलाई सजिलैसँग बुझ्दछ जहाँ तपाइँको आन्तरिक लिंकहरू छन्। तपाईंले यूआरएलहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको साइटम्यापको लागि प्रमाणिक हो। तपाईंले यो पनि पक्का गर्नु पर्दछ कि तपाईंको साइटम्याप रोबोट्स.टी.टी.एस. को नयाँ संस्करणको अपलोडमा मेल खान्छ।
यी ट्यागहरू वेब क्रोलरहरूको लागि तपाईंको स्थानीयकृत पृष्ठहरूको विश्लेषण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। गुगललाई तपाईंको पृष्ठहरूको स्थानीयकरण गरिएको संस्करणहरूको बारेमा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा भन्नाले तपाईंको वेब पृष्ठहरू अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्दछ। यो काम गर्दा, तपाईले पहिले यो कोड तपाईको पृष्ठ हेडरहरूमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ:
<linkrel="वैकल्पिक" hreflang="lang_code" herf="url_of_page" />
जहाँ "Lang_code" समर्थन भाषाको लागि एक कोड हो। तपाईं कुनै पनि URL को लागि <loc> एलिमेन्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो गरेर, तपाईं पृष्ठको स्थानीयकृत संस्करणमा देखाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए यदि तपाई सोच्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाइँको वेबसाइटको लागि तपाइँको क्रल बजेट अप्टिमाइजि Yes अझै महत्त्वपूर्ण छ, हो, यो हो। क्रल बजेट थियो, र हो, प्राय: तपाईको साइट बनाउँदा दिमागमा राख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ। हामी यी सुझावहरू तपाईंको क्रोल बजेट अनुकूलन गर्न प्रयोग गर्दछौं र तपाईंको एसईओ प्रदर्शन सुधार गर्न सक्दछौं।